शास्त्र भन्छः सुत्ने समय यी ५ चिज सिरानीमुनी राख्नुस् – onlinedarpan:
Posted on December 7, 2018 December 7, 2018 Author onlinedarpanComment(0) 130 Views
१- हनुमान चालिसाः हरेक रात सुत्ने बेलामा हनुमान चालिसा या सुन्दरकाण्ड पाठ गरेर पुस्तकलाई सिरानीमुनी राखेर सुत्नुस् । शास्त्रका अनुसार यसो गर्दा मन एकाग्र भएर शान्त हुन्छ । मनमा डर, अहम र खराव सपना समेत आउँदैन । सपनाविहिन सुताइनले शरीर पुनर्जाग्रित हुन्छ ।
२- फलामको उपकरणः सुत्ने बेला सिरानी मुनी फलामको उपकरण राख्नु राम्रो मानिन्छ । यसले तपाइँको नजिक नकारात्मक उर्जा आउनबाट रोक्छ । वालवालिका सुत्ने बेला सानो कैँची वा चकु सिरानी मुनी राख्ने चलन पनि यसकै कारण चलेको हो ।
३- मुलाः सिरानी मुनी मुला राखेर सुत्ने र विहान उठेर शिवलिङ्गमा अर्पण गर्दा शुभ फल मिलल्छ । शास्त्रका अनुसार यसले राहुको प्रभावलाई कम गर्छ र खराव सपना वा मानसिक तनाव हुनबाट रोक्छ ।
४- फूलः सुत्ने समयमा सिरानी मुनी भगवानलाई अर्पण गरेको फूल राख्दा मनमा शान्ति प्राप्त हुने शास्त्रमा उल्लेख छ । यसो गर्दा निद्रा पनि छिटो लाग्ने र विहान उठ्दा ताजा महसुस हुने समेत शास्त्रले उल्लेख गरेको छ । पछिल्लो समयमा थेरापीमा समेत यस्तो प्रयोग हुन थालेको छ ।
५- दुर्गा सप्तसती पाठ: दुर्गा सप्तसती पाठलाई सिरानी मुनी राखेर सुत्दा भयबाट मुक्ति मिल्ने शास्त्रमा उल्लेख छ । यसले दिनभर हुने चिन्ता र तनावबाट मुक्ति हुने शास्त्रमा उल्लेख छ । यसो गर्दा विहानमा उठ्दा ताजापन अनुभव समेत हुने विश्वास गरिन्छ ।-Nepali Headlines
दिमाग हल्लाइदिने भिडियो एक पटक प्रत्येक नेपालीले हेर्नै पर्नी रहिछ।।।कृपया share गरेर साथिलाई पनि सहयोग गर्नुहोला।। यो भिडियो ले धेरैको जिबन नै परिवर्तन गर्दिन सक्छ ।।।।। by message from tara ji
Gepostet von We Love Nepal am Dienstag, 8. Mai 2018
Share0TweetGoogle+Pin00shares मिर्गौला सम्बन्धि समस्या हुनमा मधुमेह प्रमुख कारण मानिन्छ । मधुमेहका कारण मिर्गौला रोग भएमा त्यसलाई डायबिटिक नेफ्रोप्याथी भनिन्छ । मधुमेह हुने चार वयष्कमध्ये एकलाई यो रोग लाग्छ । यो रोग लागेमा शरीरका विभिन्न अंगमा क्षति पुग्ने गर्दछ । सामान्यतया, उच्च रक्तचाप, मधुमेह लगायतका कारण मिर्गौलामा क्षति पुग्ने गर्दछ । जब रक्तवाहिका क्षतिग्रस्त हुन्छ, तब विस्तृतमा पढ्नुहाेस्…
Share26TweetGoogle+Pin026sharesएजेन्सी । उमेर ढल्किंदै जाँदा कपाल फुल्नु भनेको वृद्धावस्थाको संकेत मानिन्छ । त्यसैले कपाल फुल्नुलाई अनुभव र बुद्धिको भण्डारको रुपमा लिइन्छ । तर, उमेर नहुँदै कपाल फुल्न थाल्यो भने त्यो समस्या बन्छ । त्यो समस्या युवाहरुमा पछिल्लो समय अझ बढी देखिंदै गएको छ । कपालले व्यक्तिलाई सुन्दर बनाउँछ । त्यसैले कपाललाई लिएर मानिसहरु सचेत हुने विस्तृतमा पढ्नुहाेस्…
जाडोमा बाँसको तामाः किन र कसरी खाने ?
Posted on December 4, 2018 December 4, 2018 Author onlinedarpan
Share0TweetGoogle+Pin00sharesबाँसको तामा, हाम्रो रैथाने परिकार । हुन त अहिले यसको सिजन होइन । यद्यपी जाडो याममा बाँसको तामाको परिवार निकै उपयोगी हुन्छ । बाँसको तामा मानव स्वास्थ्यको लागि निकै लाभदायक मानिन्छ । यसलाई अचार, तरकारी वा सुपको रुपमा सेवन गर्न सकिन्छ । नेपालमा मात्र नभई दक्षिण एसियामा बाँसको तामाको प्रचलन छ । नेपालमा यसको परिकार विस्तृतमा पढ्नुहाेस्…